Cali Dheere "Kenya dagaalka maka joogsan doono, inta ay dalkeena duulaanka ku tahay" - iftineducation.com
iftineducation.com – Afhayeenka Guud ee Ururka Al Shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage (Cali Dheere), ayaa ku celiyay fariin kale oo uu u diray shacabka reer Kenya, oo ku aadan weerarada ka dhanka ah, ee ay Shabaabku la beegsanayaan.
“Shacabka Kenya waxaan u sheegeynaa inaysan difaaci doonin Dowladda Uhuru Kenyatta, ee danta waxay ugu jirtaa inay maslaxadooda ilaalshadaan, oo ciidamadooda nagala baxaan.” ayuu yiri Sheekh Cali Maxamuud Raage.
Afhayeenka oo wareysi siiyay Idaacada Andulus oo afka Ururka Al Shabaab ku hadasha, ayaa wuxuu ku hanjabay inaanu joogsan doonin dagaalka ka dhanka ah dalka iyo dadka reer Kenya, inta ay ciidamadoodu ku sugan yihiin dalka Somaliya.
“Kenya dagaalka maka joogsan doono, inta ay dalkeena duulaanka ku tahay. Waxaan balan Ilaahay kula galeynaa inuu qubto dhiigooda, maxaa yeelay waxay daadinayaan dhiigga shacabkeena, waxaa duulaan lagu yahay dalkeena.” ayuu yiri Afhayeenka Guud ee Ururka Al Shabaab
Sheekh Cali Dheere, ayaa ku waramaaya inay horey digniin ugu jeediyeen dalka Kenya, hadana ay ugu celinayaan digniintaasi oo uu ku sheegay inaanu dagaalku ka joogsan doonin.
“Horey waan idinkugu sheegnay hadana waan idinkugu celineynaa dagaalka ma idinka joogsanaayo.” Waxaa sidaasi yiri Cali Dheere.
Mintidiinta Ururka Al Shabaab, ayaa waxay galabta diyaarad laga lee yahay dalka Kenya ay ku soo rideen deegaan ka tirsan Buulo Gaduud, oo 30km dhinaca waqooyi kaga beegan Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose.
Madaxweynaha iyo Raiisal Wasaaraha Somaliya oo la kulmay wefdi uu hogaaminaayay Wasiirka Arrimaha Dibadda Kuwait